जसपाका अध्यक्ष यादवलाई निष्काशन गर्ने तयारी, एक्कासीको पठाएको ठाकुरको पत्रमा के छ ? - News20 Media
May 26, 2021 N20LeaveaComment on जसपाका अध्यक्ष यादवलाई निष्काशन गर्ने तयारी, एक्कासीको पठाएको ठाकुरको पत्रमा के छ ?
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम समर्थन गर्ने र विरोध गर्ने दुई धारको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले तटस्थ बसेर नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सघाउ पुर्याएको थियो । यस्तै यो समूहले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका क्रममा ओलीलाई समर्थन गरेको थियो । त्यसलगत्तै जसपाभित्र एक समूहले अर्को समूहलाई कारबाहीको शृङ्खला सुरु भएको छ ।
विवाद बढ्दै जाँदा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुसार स्पष्टीकरण सोध्नुभएको छ । अध्यक्ष ठाकुरले पार्टीको निर्णय विपरित काम गर्दै हिँडेको भन्दै यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो ।
७ बुँदे स्पष्टीकरणमा लुम्बिनी प्रदेशका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निष्काशन गर्नुको कारण, विपक्षी काँग्रेस र माओवादीसँग मिलेर सर्वोच्च अदालतमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट दायर गर्न जानुको कारणलगायत विषयमा प्रश्न सोधिएको छ ।
पार्टीको विधानको दफा ४९ अनुसार अनुशासनको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ ३ दिनभित्र पार्टी कार्यलयमा पठाउन समेत अध्यक्ष ठाकुरले आग्रह गर्नुभएको छ ।